Dagaal mar kale ka qarxey Buuhoodle - BBC News Somali
Dagaal mar kale ka qarxey Buuhoodle
8 Febraayo 2012
Image caption Dagaalka Buuhoodle
Dagaal ayaa saaka mar kale ka qarxey degaanka Buuhoodle, kaas oo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo maliishiyo degaanka ah.
Ilaa dhowr qof ayaa dhintey, waxayna labada dhinac midba kan kale ku eedeynayaa inuu dagaalka soo qaadey.
Wasiirka difaaca ee Somaliland, Axmed Xaaji Cali Cadami, ayaa BBCda u sheegey in maliishiyo degaanka Buuhoodle ka tirsan ay weeraro ku soo qaadeen fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda Somaliland, kadibna uu dagaalka qarxey.
Waxaa uu qirtey in dhankooda ilaa 12 askari ay ka dhaawacmeen, hal gaarina laga qabsadey.
Dhanka Buuhoodle, Garaad Maxamed Garaad Saleebaan Garaad Adan Colaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degaanka, waxaana uu ciidamada Somaliland ku eedeeyey inya iyagu dagaalka bilaabeen. Waxaa uu sheegey in dhankooda laga diley ilaa 3 qof, balse ay maxaabiis dhowr ah ka qabsadeen Somaliland.
Labada dhinaca ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaa u dhexeeyey dagaalo soo noqnoqdey, waxaase xaaladdu ay cirka isku sii shareertey markii maamul muran dhaliyey lagaga dhawaaqey magaalada Taleex, maamulkaas oo Somaliland ay si weyn uga soo horjeeddo.